ကလေးများကိုတန်ဖိုးထားကြပါ။ | Radio Veritas Asia
#PopeFrancis (April 16, Twitter)
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နည်းပညာပိုင်းအရမ်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပေမဲ့ ကလေးတွေအများကြီးဟာ လူမဆန်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှု၊ ညှဥ်ပန်းနှိပ်စက်မှု၊ ကျေးကျွန်ပြုမှုနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေ ဆက်ရှိနေတာက တကယ် ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ ယနေ့ အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကို သိရှိပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်နဲ့ ဘုရားရှင် သူငယ်တော်ယေဇူး ရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေကို ခေါင်းပုံဖြတ်ကျေးကျွန်ပြုတာရပ်ကြပါ။ #ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ် (April 16, Twitter)
Sadly, in this world, with all its highly developed technology, great numbers of children continue to live in inhuman situations, exploited, maltreated, enslaved, refugees. Today, in acknowledging this, we feel shame before God, before God who becameachild.
မြန်မာပြည်မှာတော့ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာတတ်တဲ့ စစ်အာဏာရူးတွေနဲ့ သူတို့နောက်လိုက်တွေက ကလေးတွေကိုပါ သတ်ဖြတ် ညှဥ်းပန်းနေတာကို အခုချက်ချင်း ရပ်ပါ။ ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို လေးစားပါ။ တန်ဖိုးထားပါ။ အမျိုးမျိုး ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်မထုတ်ပါနဲ့။ ကျေးကျွန်တွေလို မခိုင်းပါနဲ့။
ကလေးတိုင်းကို မိမိရဲ့သားသမီးလိုမျိုး ချစ်ခင်ကြင်နာပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့ လမ်းပြကောင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစား ကြပါစို့။